ओलीले बोलाए एमाले केन्द्रिय समिति बैठक : ४ नेतालाई प्रवेश निषेध ! - Kantipath.com
ओलीले बोलाए एमाले केन्द्रिय समिति बैठक : ४ नेतालाई प्रवेश निषेध !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका छन् । ६ वैशाखमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको बागमती प्रदेश सहइन्चार्ज शेरबहादुर तामाङले बताए । एमालेको विवाद बढ्दै जाँदा ओलीले महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि गरिरहेका छन् भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले देशभर समानान्तर संगठन निर्माण गरिरहेको छ ।
समानान्तर गतिविधि गरेको भन्दै ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिना निलम्बनको कारबाही गरेका छन् । ओलीले आफूलाई साथ दिनेहरुलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने तयारी पनि गरेका छन् । गएको ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा साथ दिने नेताहरुलाई सांगठनिक जिम्मेवारी दिनेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको एक नेताले बताए ।
निलम्बनमा परेका ४ नेता भने बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
Previous Previous post: यमनको माारिब प्रान्तमा भएको भिडन्तमा ४७ जनाको मृत्यु
Next Next post: कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिल उपाध्यायसहित ६ जनाले कार्यालय भित्रै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप !